O kwere omume ugbu a idozi Moto G4 Play site na Amazon | Akụkọ akụrụngwa
O kwere omume ugbu a idobe Moto G4 Play site na Amazon
Motorola na-aga n'ihu na-egosi n'ihu ma wepụta ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ na ahịa, na-agbanyewanye ike na Lenovo. Mgbe mmeghari ohuru nke ọtụtụ ezinụlọ nke smartphones, ọ bụ oge itinye ire nke Moto G4 Play, nke bụ nnọchi maka Moto E bụ ndị gara nke ọma n'ahịa.
Ngwaọrụ kwuru Enwere ike idobe ya site na Amazon na ọnụahịa nke euro 169. Nyefe dị ka ekwuputara ga-amalite na Septemba 1.
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke Motorola Moto G4 Play;
Akụkụ 144 x 72 x 8.95 / 9.9 mm
Ibu nke gram 137
5-anụ ọhịa ihuenyo na HD mkpebi
Ihe nghazi Snapdragon 410
Ntọala nchekwa 16 GB
Igwefoto azu 8-megapixel nwere f / 2.2 na 5-megapixel igwefoto n'ihu
Batrị 2.800 mAh nwere ikike kwụụrụ onwe ya nke odi ka enwere obi ike opekata mpe ụbọchị zuru ezu
Njikọta; micro USB, 3,5 mm jaak
Android 6.0 Marshmallow sistemụ arụmọrụ
Obi abụọ adịghị ya na Motorola ọhụrụ a nwere ụfọdụ àgwà mara mma, ọ bụ ezie na agbanwere maka ntinye ntinye na ndị ọzọ na-echebara ọnụahịa yiri ka ọ dị elu maka ama nke ụdị a. N'ezie, ọ dị mkpa iburu n'uche na imewe na ihe eji emepụta Moto 4G Play bụ klas mbụ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ama dị larịị nke nwere nkọwa ziri ezi, Motorola ọhụrụ a nwere ike bụrụ nnukwu nhọrọ maka gị.
Gịnị ka i chere nke a ọhụrụ Moto 4G Play na premiere price na ahịa?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » O kwere omume ugbu a idobe Moto G4 Play site na Amazon
Foxconn, onye isi Apple, mara ọkwa ọnwụ nke ndị ọrụ abụọ
Pokémon GO ka emelitere ọzọ na - enye ndị isi otu ọ bụla ohere